De Beauté Medical Aesthetic Center | Beauty MM
De Beauté Medical Aesthetic …
De Beaute’ Medical Aesthetic Centerမှ ကြိုဆိုပါတယ်။
USA မှ အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့ ရရှိထားသော ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အလှအပရေးရာ ဆေးခန်းဖြစ်ပါတယ်။
De Beaute’ မှ ကုထုံးများအားလုံးသည် ခွဲစိတ်သော နည်းလမ်းများအား အသုံးမပြုထားခြင်း ကြောင့် မခွဲမစိတ်ဘဲ လှပချင်သူများအတွက်
အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။အလှအပနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်နှာမှ ခြေဖျား အထိ ပြုပြင်ပေး နိုင်တာကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော အလှကို ပိုင်ဆိုင်လိုသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်နေရာကောင်း တစ်ခုမို့ လာရောက် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Open time 11:00 AM – 8:00 PM
09 265 599 699
No. 23(C), Kan Yeik Thar Street,Ward 10, Mayangone Township
⭕️⭕️⭕️ 31.3.2019 ထိပါရှင့် ⭕️⭕️⭕️
💧💧💧Hydrated Skin is Happy Skin 💧💧💧ဆိုသလို နွေရာသီမှာရေငတ်ပြီး ပင်ပန်းနေတဲ့ သင့်အသားရေကို ရေတိုက်ကြဖို့လိုနေပြီနော်……………..
ဒါဆို De Beauté ရဲ့ 💦💦Hya Facial Treatment 💦💦လေးနဲ့ ရေတိုက်ကြမယ်လေ………..
💙💙💙ပထမဆုံး သင့်အသားအအရေကို သေချာသန့်စင်ပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းထဲမှာ ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို Scrub & Detoxing Machine နဲ့ အရင်ဖယ်ရှားပါတယ်………..
💙💙💙မျက်နှာသွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေဖို့အတွက် ရေနွေးငွေ့ Steamer လေးနဲ့ ချွေးပေါက်လေးတွေကိုဖွင့်ပြီး မက်မွန်သီးအဆီလေးနဲ့ Gently Oil Massage ပြုလုပ်ပေးပါတယ်………..
💙💙💙Diamond Dermabrasion ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်နှာပေါ်ရှိဆဲလ်သေ ဆဲလ်ဟောင်းတွေနဲ့ ဆားဝက်ခြံများကို စနစ်တကျစုပ်ထုတ် ဖယ်ရှားပေးပါတယ်……….
💙💙💙ဆဲလ်အသစ်လေးတွေပဲရှိတော့တဲ့ သင့်အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ဘုရင် Hyaluronic Serum ကို Cooling Wave Machine အသုံးပြုပြီး အသားအရေအတွင်းပိုင်းထိ ရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး အချိန်ကြာကြာ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပေးပါတယ်………..
💙💙💙နောက်ဆုံးမှာတော့ Epidermal Growth Factor (EGF)ပါဝင်တဲ့ Mask ကပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်မျက်နှာအသားအရေရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ရေဓာတ်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်……….
💙💙💙 ရေဓာတ်ပြည့်လာတာနဲ့အမျှ အသားအရေက အဆီပြန်တာနည်းလာစေပြီး ဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလေးနဲ့ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Glowing Skin ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါနော်…………
(၁) ကြိမ် ➡️➡️➡️ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
💧💧💧(၁)ကြိမ် ➡️20%➡️ ၄၀,၀၀၀ ကျပ်
💧💧💧(၅)ကြိမ် ➡️30%➡️ ၁၇၅,၀၀၀ ကျပ်
💧💧💧( ၁၀)ကြိမ် ➡️50%➡️ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
❣️❣️❣️ EXPIRE Date မကန့်သတ်ထားလို့ ပျော်ပျော်ကြီး ဝယ်ထားလို့ရတယ်နော် ……….
♥️♥️♥️ သူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ SHARE ပြီးသုံးလို့ရသေးတော့ များများဝယ်လေ ရှယ်လေ တန်လေဆိုတာမျိုးပေါ့ 😊😊😊
🔴🔴🔴 ဘွတ်ကင်လေးကြိုတင်ဖို့လည်း မမေနဲ့ဦးနော်……….
♥️♥️♥️ပရိုမိုးရှင်းကာလ 15 Feb 2019 မှ 15 March 2019 အထိနော်………
👸👸👸Cleopatra အလှဘုရင်မလေးတစ်ပါးလိုဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ 💕De Beauté💕ရဲ့👑👑👑Cleopatra’s H.I.F.U (Hi-Queen ) 👑👑👑ကုသမှုလေးရှိနေပြီဆိုတာ သင်သိပါသလား………..😲😲😲ပုရိဿအပေါင်းတို့ မှင်တက်ငေးမောနေရင်း သူတို့ပါအားကျလာလို့ လိုက်လုပ်လိုက်ရတဲ့ ကုသမှု……….
🔴🔴🔴သင့်အလှတရားကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အဆီပိုတွေကို အသံလှိုင်းရဲ့ပြင်းအားနဲ့ ချေဖျက်ပျော်ဝင်စေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းကျစ်လျစ်စေတဲ့အပြင် ကော်လဂျင်အသစ်သစ်တွေကိုမွေးဖွားလှုံ့ဆော်ပေးလို့ အသားအရေကိုပါ ချောမွတ်ဝင်းပကြည်တောက်လာစေတဲ့ကုသမှု………….
🌟🌟🌟Fat Dissolving + Skin Tightening + Glowing ဆိုတဲ့အတိုင်3းin 1 Action တွေပေးတဲ့ အလှဘုရင်မလေးတစ်ပါးရဲ့လက်ဆွဲတော် Cleopatra’sH.I.F.U (Hi-Queen )
✨✨✨ဆန်းကြယ်တဲ့ခေတ်မှီနည်းပညာတွေအစွမ်းနဲ့ နာကျင်မှု လုံးဝမရှိစေဘဲ သင့်အား အိုစာစေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို အခုပဲ 👑👑👑Cleopatra’s H.I.F.U (Hi-Queen )👑👑👑 လေးနဲ့ ရှင်းလင်းပစ်လိုက်ကြရအောင်…………
❣️ ပထမဆုံး အယောက် ၃၀ တွက် ❣️ဆိုတော့ မြန်မြန်ဘွတ်ကင်တင်ဖို့တော့လိုမယ်နော်
❣️(၁)ကြိမ် ➡️➡️➡️ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
❣️(၁)ကြိမ် ➡️➡️➡️ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
❣️(၃)ကြိမ် ➡️➡️➡️ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
De Beaute’ မှရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
(1) မျက်နှာအသားအရေ ကြည်လင်လှပအောင် ပြုပြင်ပေးခြင်း (Facial Treatments)
(2) ဝက်ခြံကုထုံး (Acne)
(3) တင်းတိပ်ကုသခြင်း (Melasma)
(6) မျက်နှာသွယ်လျ လှပအောင် V-Shape ပုံစံပြုပြင်ခြင်း (Non-Surgical V-Shaped Facial Contouring)
(7) နှုတ်ခမ်းသားကို မခွဲမစိတ်ဘဲ ပြုပြင်ပေးခြင်း (Non-Surgical Lip Augmentation)
မခွဲစိတ်ဘဲ နှာတံသွယ်လျအေင် ပြုပြင်ပေးခြင်း (Non-Surgical Rhinoplasty)
(9) လေဆာအသုံးပြု၍ အသားအရေ ပြုပြင်ခြင်း (Laser skin rejuvenation)
(10) အရေးအကြောင်းများ လျော့ချပေးခြင်း (Wrinkle Reduction)
(1) ဦးရေပြားအား ပြန်လည်ကျန်းမာစေခြင်းဖြင့် ဆံပင်ပြန်ပေါက်အောင် ကုသပေးခြင်း (Hair and Scalp Treatment)
(1)ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီများအား ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျစ်လစ်သွယ်လျစေခြင်း။ (Body Contouring and Tightening)
(2) လေဆာဖြင့် တက်တူးများကို အမာရွတ်မကျန်အောင် ဖယ်ရှားခြင်း (Laser Tattoo Removal)
(3) ချိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးခြင်း။ (Underarm Rejuvenation Program)
(4) သေးသွယ်လျပ ကျစ်လစ်သော ခြေထောက်တစ်စုံ ဖန်တီးပေးခြင်း (Calves Slimming & Legs Hair Removal)